असार ११, २०७५ पत्रपत्रिका
काठमाडौँ – प्रख्यात न्यूरोसर्जक डा. उपेन्द्र देवकोटालाई राजकीय सम्मान दिने निर्णय गरेर चीन गएका मितव्ययिताको नारा दिने प्रधानमन्त्री केपी ओली ११९ जनाको जम्बो टोली बोकेर स्वदेश फर्किसकेका छन् ।
बाँचुन्जेल आफ्नै पार्टीको षड्यन्त्रका सिकार बनाइएका नेपाली चिकित्सा क्षेत्रका हीरा मानिने डा. देवकोटालाई मरेपछि गर्न खोजिएको यो सम्मान पनि कतै ओलीको सस्तो लोकप्रियता कमाउने नियमित चाल मात्र त होइन ?
भन्ने कुरा मर्नुअघि डा. देवकोटाले आफ्नो अनुभव र अनुभूतिलाई संगालेर व्यक्त गरेका ‘मेरो माटो, मेरो चन्दन’ को शृङ्खला–२८ पढ्ने जो–कोही पाठकलाई सजिलै अनुभूति हुन्छ । पुष्करलाल श्रेष्ठद्वारा लिखित यो लेख आजको नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
किनभने लामो समयदेखि मृत्युलाई कुरेका र ‘राष्ट्रिय नायक’ मानिएका डा. देवकोटालाई जोगाउन राज्यबाट अन्तिम समयसम्म के–कस्ता उपायहरु अवलम्बन गरिएका थिए भन्ने बारे एउटा पनि समाचार पढ्न पाइएको थिएन ।
राष्ट्रका लागि अविस्मरणीय योगदान दिने स्वाभिमानी व्यक्तित्वहरुलाई बाँचुन्जेल पीडा दिने र मरेपछि गोहीको आँसु बगाउने हाम्रा नेताहरुको द्वैधचरित्र स्वर्गीय डा. देवकोटाले यो शृङ्खलामा व्यक्त गरेका मार्मिक अभिव्यक्तिहरु पढेपछि घामजत्तिकै छर्लङ्ग हुन्छ ।
जीवनमा मर्नुअघि उनले एउटा ठूलै सपना बोकेका रहेछन्– नेपालमा न्यूरोलोजीको छुट्टै अस्पताल बनाउने, न्यूरो सर्जरीको सेवा स्थापित गर्ने, न्यूरो सर्जरीको तालिम देशभित्र नै सञ्चालन गरी आफ्नै मुलुकमा न्यूरोसर्जकहरु उत्पादन गर्ने र न्यूरो सर्जरी एवम् न्यूरोलोजीको विशाल इन्स्टिच्युट बनाई इन्स्टिच्युट अफ न्यूरो साइन्स स्थापना गर्ने ।
न्यूरोलोजीलाई, न्यूरोसर्जरीलाई कसरी बाइपास गर्ने भनेर धेरै तल्लो लेबलको पोलिटिक्स खेलियो । म पछि पनि आउँछु त्यसमा, त्यो मेरो लागि एकदमै तीतो अनुभव हो ।
त्यसलाई म मीठो बनाएर भन्न सक्दिनँ । किनभने मेरो जिन्दगीको धेरै बहुमूल्य समय बर्बाद भएको छ । अन्तिममा ठूलो षड्यन्त्रमूलक तरिकाले न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलोजीलाई त्यो दौडबाट ‘आउट’ गरियो ।
त्यसलाई मैले धेरै सहज तरिकाले लिएको छैन । एउटा मान्छेको जिन्दगी त्यहाँ व्यतीत गर्न लगाइयो । मेरो कन्सेप्ट पहिलादेखि नै क्लियर थियो ।
यी चारवटा विषयमा केन्द्रीय लेबलमा ठूला इन्स्टिच्युट चाहिन्छ । अनि त्यसका शाखा–प्रशाखाहरु अन्त लैजाने हो । यिनीहरु हरेक अस्पतालमा खोल्न सकिँदैन ।
बेलायत सरकारले सकेन, अमेरिकाले सकेन भने नेपालले सक्दैन । अहिले जे भइरहेको छ, हरेक नर्सिङ होममा एउटा एउटा डिपार्टमेन्ट सबै विषयको, त्यो गलत हो । उनीहरुले स्तरीय सेवा दिन सक्दैनन् ।
यी चारवटा विशेषज्ञ सेवाहरु केन्द्रीय स्तरमा या केन्द्रीकृतरुपमा हुन्छ । अरु सेवाहरु विकेन्द्रीकृत गरिन्छ । तर हाइली स्पेसलाइज अथवा कार्डियोलोजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलोजीको, क्यान्सर र बच्चाका सेवाहरु जहिले पनि केन्द्रीकृत हुन्छन् ।
प्रकाशित : सोमबार, असार ११, २०७५०६:४७
छुट्टाछट्टै दुर्घटनामा दुईको मृत्यु
बालुवाटारमा ओली नै अाेली
फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दै सरकार ?
उखुबारी छेउको बाटो हिँड्नै डराउँछन् निर्मलाका साथी, भन्छन् – “त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै झसंग भइन्छ”